Mitady hevitra faharoa? Zato ve? | Martech Zone
Mitady hevitra faharoa? Zato ve?
Alatsinainy, Aogositra 3, 2009 Talata, Oktobra 20, 2015 Douglas Karr
Nisy haintrano mihitsy rehefa nampiroborobo ny fampiasana crowdSPRING. Ireo ao amin'ny vondrom-piarahamonina mpamorona izay hajaiko fatratra na dia somary fihatsarambelatsihy ihany aza ny fankasitrahana ny crowdSPRING sy ny hafa rafitra spec toy ny 99designs, raha miaro ny maso misahana ny famolavolana maso ihany koa.
Tsy mino aho fa iray na iray io, I do mankasitraka roa! Nanao fanamby tamin'ny mpivady Tsia aho! Ireo mpanohana manokana dia hanome torohevitra vitsivitsy:
Ahoana no ahazoan'ny mpamorona orinasa volavola tsara raha tsy misy loharano handoavana izany?
Ahoana no ahazoan'ny mpamorona endrika vaovao ahafahana mahazo ny anarany sy miasa eny an-tsena (nefa tsy manao famolavolana maimaimpoana!)
Mety misy safidy fahatelo koa. Raha raharaham-barotrao ka tsy mahazaka mpamorona mahay, angamba azonao atao ny mahazo hevitra momba ny famolavolana na ny volanao. Izay ihany Concept Feedback nivelatra.
Concept Feedback somary mashup… eo anelanelan'ny tambajotra sosialy ho an'ny mpamorona sy ny fampiharana Digg-style hifidy ny famolavolana hevitra. Angamba ny singa miavaka indrindra dia ny hoe tsy mila mandefa ilay foto-kevitra ampahibemaso ianao, azonao atao ny mifehy izay mahazo ny hevitrao. Mety ho ilaina amin'ny fanehoan-kevitry ny style group!
Fa maninona i Andrew no nandefa ilay tranonkala?
Amin'ny maha talen'ny marketing azy, Andrew Follett dia nandefa foto-kevitra maro momba ny famolavolana… nandefa azy ireo mailaka tamim-pitandremana tamina namana, fianakaviana ary mpiara-miasa, avy eo nanome antsipirihany momba ny valiny. Nandany fotoana be ny fizotrany ary tsy dia nanampy firy. Tamin'ny volana Janoary dia nanatona namana iray i Andrew DevBridge momba ilay hevitra. Nanapa-kevitra ny hiara-hiasa amin'i Andrew i DevBridge ary natomboka ny volana martsa ny fampandrosoana. Ny Konsept Feedback dia natomboka tamin'ny Mey.
Inona no antenain'i Andrew amin'ny hoavin'ity tranonkala ity?
Amin'izao fotoana izao, Andrew dia miasa amin'ny fampitomboana ny isan'ny mpampiasa ao amin'ilay tranokala sy ireo mpamorona mpandray anjara. Rehefa mitombo ny fitomboany, dia te hampiasa ny hevitra momba ny hevitra mba hanohizana ny fampivoarana sy ny fampiroboroboana endrika fanampiny ao amin'ilay tranonkala.
Heveriko fa foto-kevitra tsara io! Ary koa, kudos to DevBridge amin'ny fampandrosoana ny tranokala!
Tags: hevitra momba ny hevitrakonsepfeedbackhevitry ny mpamoronaFeedbackhevitra momba ny marketinguiui hevitratamberina fanandramana niainan'ny mpampiasahevitry ny mpampiasa interface tsarauxux hevitrahevitra momba ny famolavolana tranonkala
Hevitra lehibe tsy misy dikany
Kaonty Google Analytics iray, sehatra maro